Inona No Fanambin’ny Taona 2016 Atrehin’i Amerika Latina? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Janoary 2016 15:43 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, русский, বাংলা, Español
Vondrona artista ara-maso iray nanomana hetsika ahitana fandokoam-batana Indiana tao afovoan-tanànan'i Caracas, Venezoelà, ao anatin'ny fankalazana ny 12 Oktobra, fantatra amin'izao fotoana izao ho Andron'ny Fijoroan'ny Teratany. Sary nopihan'i Sergio Alvarez. Copyright © Demotix. 10/14/2015.
Azo antoka fa taonan’ ny zava-bita, fiovana sy fifandirana tao Amerika Latina tamin'ny 2015. Manomboka amin'ny fifidianana niteraka fiovana ideolojika ka hatramin'ny fihetsiketsehana mampiroborobo ireo hetsiky ny olom-pirenena, nasehon'ny tao amin'ity faritra ity ny fironana hanontany ireo andrim-panjakana sy ny rafitra ara-tsosialy nankatoavina.
Nanao dingana ara-politika manalavitra ny elatra ankavia nahafantarana ny faritra nandritra ny taom-polo lasa i Arzantina sy Venezoela. Nanatevin-daharana ireo firenena hafa ao Amerika Latina i Shily tamin'ny fankatoavana ny fanambadiana ofisialin'ny olon-droa mitovy taovam-pananahana, ary sambany nifidy solombavambahoaka nanova taovam-pananahana i Venezoela ary niaina hetsika goavana amin'ny ady amin'ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy kosa i Arzantina.
Mijanona ho fanamby sarotra ny zon'olombelona sy ny fahalalahana maneho hevitra. Na izany aza, nankasitrahana ireo mpanao fanadihadiana sy mpikatroka lehibe noho ny famoahana ny marina amin'ny fanitsakitsahana ny zo fototra izay matetika sarotra ny mankasitraka sy miady amin'izany.
Navitrika tanteraka ihany koa ireo fikambanana miaro ny zon'ny vazimba teratany. Manomboka amin'ny fihetsiketsehana manohitra ny fomba fijerintsika ny tantara tamin'ny 12 Oktobra hatramin'ny fitakiana fanatsarana ny fari-piainan'ireo vondrona ara-poko isan-karazany manerana ny kaontinanta, nampahafantatra ny herin'izy ireo tao amin'ny firenena misy azy ireo ny fiarahamonina indizeny.
Nolazaina tamin'ny alalan'ny tatitry ny olom-pirenena amin'ny aterineto, ny fampahalalam-baovao ao an-toerana sy ny fampahalalam-baovao hafa izany rehetra izany ary koa tamin'ny alalan’ ireo izay liana nanome sehatra ho an'ny tantara izay matetika nafenina na zara raha hita amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra. Ireo loharanom-baovao ireo no nahafahan'ny ekipan'ny Global Voices Amerika Latina nanatontosa ny asa sarobidiny.
Satria nifarana ny taona 2015, maromaro ireo fanontaniana tsy ahitam-baliny, ary mbola maro ireo tantara tsara ho fantatra: ny olan'ny fifindra-monina ao anatiny sy ivelan'ny tontolo miteny Espaniola, ireo hetsika ara-kolontsaina sy zana-kolontsaina isan-karazany, ny voka-dratsin'ny herisetra izay manohy manakana ny fandrosoan'ny fiarahamonina Amerika Latina sy ny ezaka iombonan'izy ireo. Na izany aza, mbola mitohy ihany koa ny hetsiky ny olom-pirenena sy ny fanoherana ny fitondrana.
Maniry hanohy hatrany hitatitra ireo hetsika tahaka izao ny Global Voices ary hanampy ireo izay te-hahatakatra ny olan'ny faritra amin'ny fomba lalindalina kokoa. Amin'izany, te hametraka ireto fanontaniana ireto izahay:
“Inona no fanamby hatrehin'i Amerika Latina amin'ny taona 2016?
Inona ireo zava-bita tokony harahantsika maso akaiky?
Inona ny hetsiky ny olom-pirenena na hetsi-piarahamonina tokony harahantsika ?
Manorata aminay ao amin'ny kaonty Twitter na ao amin'ny takelaka fanehoan-kevitra amin’ ity lahatsoratra ity. Na tsara kokoa: Raha manana valinteny mihoatra ny iray ianao na manana hevitra maromaro, manaova mpanoratra ato amin'ny Global Voices. Mitady mpandray anjara hatrany te hilaza amin'izao tontolo izao ny tantaran'ny Amerika Latina avy amin'ny fomba fijery mifototra amin'ny feom-bahoaka hatrany ny Global Voices Amerika Latina.
Miandry ny valinteninao izahay!